ရယ်စရာ Archives - MM Live News
ကျုပ် သိပ်ကြည့်မရတဲ့ထဲမှာအကြွားသန်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ် …… ဘယ့်နှယ် …..စဉ်းစားကြည့် ..… ကျုပ်၁၀တန်းအောင်တုန်းက ဂုဏ်ထူး၅ဘာသာပါတယ်.. ခုချိန်ထိဘယ်သူ့မှ မပြောပြဖူးဘူး အာ့နဲ့ ဖေဖေက ၅ကျပ်သားဟမ်းချိန်းလေးလုပ်ပေးတယ် ကြွားတယ်ထင်မှာစိုးလို့ မဝတ်ဘူး .. ဟိုတလောက အပျင်းပြေ ရောက်ရင်နေဖို့ ပြင်ဦးလွင်မှာ အိမ်နဲ့ခြံဝယ်လိုက်တာ သိန်း ၆၀၀၀ ပေးရတယ် ဘယ်သူမှမသိဘူး .. ကျုပ် အိုင်ဖုန်း7ကိုဖုန်းပြောဖို့ Note7ကိုလိုင်းသုံးဖို့ဝယ်တုန်းကရော အွန်လိုင်းမှာ ရေးပီးကြွားဖူးလားပြော ???? ကြွားရမှာ ကျုပ်အရမ်းရှက်တာ …… အိမ်မှာ စီးပွားရေးတက်လို့ Lexus လေး တစ်စီးဝယ်တယ် ဘယ်တော့မှ လူရှေ့သူရှေ့ကားရှိတယ်လို့ ထုတ်မပြောဘူး မစီးဘူး မကြွားတတ်တာကိုက ငယ်ငယ်တည်းက အကျင့်လေ .. .. Shopping တစ်ခါထွက်ရင် […]
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး…
ဦးဆိုရင်​​ကြောက်​​နေရသည်​😊😊😝 ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော်သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့တော့မယ်ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေမိတယ်။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ” “ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီတောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက်ကုန်တယ်။လခွမ်းမှပဲ။ “ဟဲ့ နေပါဦး ခလိန်း ဘာပြော” “ခလိန်းမှာ ဦး နဲ့ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ခစ်ခစ်” “ဟယ် ဘယ့်နှာလုပ် ကိုယ်ဝန် ရှိနေသတုန်း နင်နဲ့ငါ အပြင်မှာလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပဲနဲ့” “ဦးနော် ဘာလဲ […]
ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ် …။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ …။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး …။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ် …။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း … “အမေ …။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား …” “မထကြသေးဘူး …” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့ …” “ကိုယ့်ဖာသာ စားမှာကိုမြန်မြန်စားစမ်းပါဟာ …။ တော်ကြာကျောင်းနောက်ကျနေအုန်းမယ် …” ဒီလိုနဲ့ မောင်ရွှေအေးလဲ မနက်စာစားပြီး ကျောင်းထွက်သွားပါတယ် …။ မုန့်စားကျောင်းဆင်းတော့ ကျောင်းနဲ့အိမ်က နီးနေတဲ့အတွက် မောင်ရွှေအေးက အိမ်ပြန်လာပြီး ထမင်းစားလေ့ ရှိပါတယ် …။ ထမင်းစားနေရင်း […]
ဘဏ်မှာ ငွေသွားထုတ်တော့ အောက်စလွတ်နေတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်မိသောအခါ….
April 4, 2019 April 4, 2019 MM Live
အောက်စလွတ်နေတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်မိသောအခါ တနေ့ကပေါ့…ဘဏ်မှာ ငွေသွားထုတ်တာ မှတ်ပုံတင် ပေးပြီး အလှည့် မရောက်ခင် ခဏ ထိုင်စောင့်နေ ရတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံတန်းမှာ အမျိုးသမီးတွေချည်း ဆိုတော့ တဖက် ခုံတန်းမှာ ဝင်ထိုင် မိတယ်။ ယောက်ျားသား ဆိုလို့ ကျနော် တယောက်တည်း…ခပ်တည်တည်နဲ့ ထိုင်ပြီး ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ရှေ့က အမျိုးသမီးတွေဆီ အကြည့်ရောက်သွားတာ…. အလိုလေး ……ကောင်မလေး တယောက်က လိုင်းသုံးရင်း အောက်စ လွတ်နေတယ်လြေ့ငု့ါပမြ။ ခက်တော့ ခက်ချေပြီ … … မျက်နှာပူလိုက်တာ … ဘယ်လို အသိပေးရပါ့မလဲ။းးးးးး ကောင်မလေးက ချောချောလှလှလေး….အပြောမတတ်ရင် ကိုယ့်ပါ နှာဗူး ထင်နေအုံးမယ် ။ ဟဲ့ကမလေး … အောက်စလွတ်နေတယ်….အင်းအဲ့လိုပြောလို့လည်း မဖြစ်သေး… … […]
ကျား ​ရေကူးကန်မှာ ၀င်ကြေး1000၊ မ ​ရေကူးကန်မှာဆို 10000 ! ဘယ်သူဝင်ကူးကူး….
March 26, 2019 MM Live
ရေကူးကန်တစ်ခုမှာ ကျားရေကူးကန် နဲ့ မ ရေကူးကန်ဆိုပြီး နှစ်ခုခွဲထားတယ်..။ ထူးခြားတာက ယောက်ျားလေးတွေ လည်း မ ရေကူးကန်မှာ ၀င်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ချိုးခွင့်ပြုထားတယ်..။ ဈေးတော့ ပိုပေးရတယ်ပေါ့..။ ဧည့်သည် ။ ။ ဒီမှာရေတခါချိုးရင် ဘယ်လောက်လဲ? ဆိုင်ရှင် ။ ။ ကျား ​ရေကူးကန်မှာဆို 1000၊ မ ​ရေကူးကန်မှာဆို 10000 ! ဧည့်သည် ။ ။ ခင်ဗျားဟာက ဈေးကွာလှချည်လား ? ဆိုင်ရှင် ။ ။ ကျား ရေကူးကန်လား? မ,ရေကူးကန်လား? မြန်မြန်လုပ် နောက်မှာ တန်းစီနေတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဧည့်သည် ။ ။ ရော့ 10000 ! မ,ရေကူးကန်မှာ ကူးမယ်။ […]
” လွှတ်ပါ ကိုစိုး ရယ် … ခင့်ကို ချစ်ရင် လွှတ်ပါတော့ ”
March 5, 2019 MM Live
လွှတ်ပါ ကိုစိုးရယ် ” လွှတ်ပါ ကိုစိုး ရယ် … ခင့်ကို ချစ်ရင် လွှတ်ပါတော့ ” ပြောလည်းပြော ခင်နှင်းဦးက အတင်းရုန်း၍ ထရပ်လိုက်သည် ။ စိုးသီဟ ကလည်း သူမကို ဖက် ထား တာကို မလွှတ်ဘဲ သူကပါ ထ၍ မတ်တပ် ရပ်လိုက်သည်။ “ ချစ် လို့ ပါ ခင်ရယ် … နောက်ပြီး ကျောင်းပြီးရင်ပဲ ကိုယ်တို့ လက် ထပ် ကြ တော့ မှာ ပဲ ကွာ ” “ အို … လက် ထပ် မှ လက် ထပ် ပေါ့ … ခုလိုတော့ […]
ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာနဲ့ တွေ့မှ ခံလိုက်ရတဲ့ ကားစပယ်ယာနဲ့ဒရိုက်ဘာ
သီတာ ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ပါ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေ မုံရွာ _ မန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာရှိ၍ ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လား မပြောတတ် ဆရာတော်ခရီးသွားတိုင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်း မရတတ် တစ်ဆယ်နောက်က ထိုင်ခုံနံပါတ်သာ ရလေ့ရှိသည်။ ဒါကို ဆရာတော် မကျေနပ်ချင် သံဃာခုံလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရှေ့ခန်းတန်းမှာ အမျိုးသမီး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ ထိုင်နေပြီး မိမိက တစ်ဆယ်နောက်မှာ ထိုင်ရလေ့ရှိတာလည်း သတိထားမိသည်သာ… လမ်းက စောင့်စီးမည်ဟု ကြိုတင်မှာကြားထားသဖြင့် ကားလာချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်သည် ။မိနစ် နှစ်ဆယ်ခန့် စောင့်လိုက်ရပြီး…… ဆရာတော်စီးမည့်ကား ဆိုက်လာသည်။အထုပ်အပိုးနှင့် စောင့်နေသည်က ဦးနန္ဒိမာ တစ်ပါးသာ ကားစပယ်ယာက ဆရာတော်ကိုကျော်ပြီး ခရီးသည်နာမည် အော်ခေါ်လိုက်သည်က… မုံရွာလိုက်မယ့် လမ်းကြုံခရီးသည် ခုံနံပါတ် တစ် မသီတာ ရှိလားခင်ဗျား…!!!! […]
February 18, 2019 MM Live
သားမက်က ညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေကို ယောက္ခထီးကြီးက အကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ
February 10, 2019 February 11, 2019 MM Live
သား ညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေကို အဖေက အကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ ကျား အားတိုး​ဆေးထဲမာခွေးလျားနက်စေ့အကြောင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ” မကြင်​မြ..” ” ​​ဘာတုန်းကို​ဆောင်း ” ” ငါ့ ​ခွေး​လှေးယားသီး အနက်​​စေ့​တွေ ဘယ်​မတုန်း” ” ဟင်​…..ကျုပ်​လည်း ဘယ်​သိမတုန်း ၊ ​တော်​ကဘယ်​မှာထားလို့လဲ ” ” ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ် တင်​ထားတာ​လေ ”မောင်​​ဆောင်း အ​တော်​​ဒေါသထွက်​မိတယ်​။ ဘယ့်​နှယ်​ဗျာ…​ခွေး​လှေးယားသီးအနက်​​စေ့က ကျားခွန်​အားတိုးတယ်​ဆိုလို့ ဝယ်​စားပါတယ်​ ။ ဘယ်​သူမှ မစား​လောက်​ပါဘူး​လေဆိုပြီး ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ်တင်​ထားကာမှ ​ပျောက်​ချင်းမလှ​ပျောက် သွား​တော့ ​ဒေါသမထွက်​ပဲရှိမလား ။ ” င​ဆောင်း.. ” ” ဗျာ..အ​ဖေ ” ” ခဏလာဦး…​မောင်​​ဆောင်းရဲ့ ​ယောက္ခထီးကလှမ်း​ခေါ်​တော့ ​မောင်​​ဆောင်းလည်း ​ဒေါသကိုချုပ်​တည်းပြီး ​ယောက္ခထီးဆီသွားရတာ​ပေါ့ ။ ” ​ခွေး​လှေးယားသီးအ​စေ့ကို […]